Akụkọ anyị - Shanghai Chigong Industrial Co., Ltd.
Ụlọ ọrụ anyị na-agbagharị agbago malitere afọ 30 gara aga na-eme eriri nchara dị ala maka ebumnuche mmiri na ihe ịchọ mma, ebe ị na-achịkọta ahụmịhe, ndị ọrụ & teknụzụ gbasara ihe yinye, ịgbado ọkụ, ịcha ọkụ na ọgwụgwọ & ngwa ngwa na ụlọ ọrụ dị iche iche. Akara akara nọ na -ekpuchi ọkwa 30, ọkwa 43 na ruo ọkwa 70. Nke a bụ isi n'ihi enweghị ike igwe igwe na -arụ ọrụ n'oge ahụ maka imepụta ike alloy steel dị elu, mana jiri nchara carbon naanị maka ụlọ ọrụ na -emepụta yinye.
Igwe igwe anyị na-eme agbụ mgbe ahụ bụ akwụkwọ ntuziaka, teknụzụ ịgwọ ọkụ ka na-erutekwa.
Ka o sina dị, mkpebi siri ike anyị na agụụ anyị maka ime njikọ njikọta ígwè enyerela anyị aka rụpụta ihe bara uru n'ime afọ ndị ahụ:
Ogo Nke mbụ site na ụbọchị 1 nke ụlọ ọrụ anyị dị. Anyị maara nke ọma na yinye siri ike dịka njikọ na -adịghị ike, yabụ, iji mee njikọ nke ọ bụla ka ọ dị mma ruo afọ 30 ruo ugbu a.
Ntinye ego akụrụngwa nwere ihe karịrị 50% uru ụgbụ ụlọ ọrụ rụpụtara kemgbe ọtụtụ afọ.
Na-arụ ọrụ na mahadum na ụlọ ọrụ na ịgbado ọkụ, ọgwụgwọ ọkụ & ịnwale ụdọ ka ọ dị mma.
Nọgidenụ na -amụ maka ahịa ụlọ na nke mba ofesi chọrọ n'ihe atụ ụdị, akara, ngwa, R&D, ọkọnọ asọmpi, wdg.
Mgbe ị na-elegharị ụlọ ọrụ agbụ ígwè anyị taa, ọ bụ ụlọ ihe omumu nke nwere igwe eji arụ ọrụ igwe eji arụ ọrụ akpaaka zuru oke, na-agbanyụ ọkụ & na-ewe iwe ọkụ na-eme ka ọkụ dị ọkụ, igwe nnwale nnwale ogologo esemokwu, usoro njikọ njikọ njikọ & akụrụngwa nnwale ihe.
Ekele maka mmepe injinia igwe, yana igwe igwe igwe China R&D maka ihe nchara alloy (MnNiCrMo), anyị emebela ngwaahịa anyị nke ọma maka ugbu a na ọdịnihu, ya bụ, ịdị mma na ike dị elu gburugburu agbụ ígwè njikọ maka:
Sistemụ kọfị / na -egwupụta ọla kọpa / na -ebugharị ya (ụdọ n'otu DIN22252, nha ruru 42mm dia.), Gụnyere Armored Face Conveyors (AFC), Ndị na -ebugharị Stage Beam (BSL), igwe isi ụzọ, wdg.
Ngwa na -ebuli elu & slinging (ụdọ nke ọkwa 80 na ọkwa 100, nha ruru 50mm dia.),
Ngwa ndị ọzọ na -ama aka gụnyere igwe mbuli elu ịwụ na ụdọ azụ (kwa DIN 764 & DIN 766, nha ruru 60mm dia.).
Afọ iri atọ nke akụkọ ihe mere eme nke njikọ njikọta igwe nchara adịghị anya site na mbido, anyị nwere ọtụtụ ihe anyị ga -amụta, imepụta na imepụta …… ihe ịma aka, anyị kpebisiri ike iburu ya wee bulie ya elu:
Ijigide sistemụ njikwa ogo dị elu;
Iji dobe nnukwu ego na teknụzụ & mmelite akụrụngwa;
Iji gbasapụ ma mụbaa nha yinye & oke ọkwa iji gboo mkpa ahịa dịlarị ebe ahụ, gbakwunyere, ụdọ njikọ njikọ nke ọkwa 120;
Ịkekọrịta ndị ahịa anyị, ndị ọrụ na ọha mmadụ karịa njikọ njikọ, ya bụ, ahụike, nchekwa, ezinụlọ, ike dị ọcha, ndụ ndụ ndụ ndụ…
Akụ na ụba ụwa abanyela n'ime oge ọhụrụ, juputara na ụlọ ọrụ & okwu nke igwe ojii, AI, E-commerce, Digits, 5G, Science Life, wdg… ụlọ ọrụ ọdịnala gụnyere ndị na-emepụta yinye ka na-arụ ọrụ dị ka ntọala nkuku ụwa maka ijere ọtụtụ mmadụ ozi. ibi ndu ka mma; na maka nke a, anyị ga -aga n'ihu na -eji nsọpụrụ na mkpebi siri ike na -arụ ọrụ dị mkpa mana ebighi ebi.
Iji kpokọta ndị otu nwere mmasị na ndị ọkachamara,
Iji tinye usoro nka na njikwa ọgbara ọhụrụ,
Iji mee njikọ njikọ ọ bụla nha ma sie ike.